နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်များနှင့်၎င်းတို့၏လှုပ်လှုပ်ရွရွဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံများကိုဖော်ထုတ်သည့် INSTAGRAM အကောင့်တစ်ခုရှိသည် - သတင်း
နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေအကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ Instagram အကောင့်ရှိတယ်
ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းကျော်ကြားသူတွေနဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးသူတွေကသူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတခါတရံလုံးဝကွဲပြားခြားနားတဲ့အတိုင်းအတာအထိ photoshop လုပ်ကြတယ်။ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင် Instagram အကောင့်ကိုရက်ရက်စက်စက်ရိုက်ချက်များမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်ဝေမျှပြီးလုပ်သူများကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
ဒီအကောင့်ကိုခေါ်တယ် မိုးကုတ် အကယ်၍ သင်အမှန်တရားကိုမတွေ့မြင်လိုပါကဤစာမျက်နှာကိုထားခဲ့ပါ။ ဒီစာမျက်နှာမှာအဖြစ်မှန်ကိုကြိုဆိုပြီးကာရာရှီယန်လူမျိုး၊ ဟာဒီဒစ်အစ်စမစ်များနှင့်အခြားနာမည်ကြီးသူများ၏ဓာတ်ပုံများကိုမျှဝေသည်။ ၎င်းသည် FaceTune ၏အနုပညာလက်ရာများပျက်ကွက်သည်ဟုစွပ်စွဲပြီးအပြောင်းအလဲသို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ထားသည့်ဓါတ်ပုံများအတွက်မြှားများကိုတောင်ထည့်သည်။ ထိုလင်းယုန်မျက်လုံးမဟုတ်သောကျွန်ုပ်တို့တောင်မှထိုကွဲပြားခြားနားမှုများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
အကောင့်တွင်ဗြိတိန်မှရုပ်မြင်သံကြားမှကြယ်များစွာသည်၎င်းတို့၏ရုပ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်နေသည်ဟုစွပ်စွဲသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Arabella Chi၊ Kady McDermott နှင့် Zara McDermott ကဲ့သို့သော Love ကျွန်းသားများ။ အောက်ကိုလှိမ့်ကြည့်ပါ
Instagram / Paparazzi ဓါတ်ပုံများ Facetune လားကောင်းလားလှည့်စားနည်းလား။ အတွေး ?! + ဆုကြေး
မျှဝေသည် အဖြစ်မှန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် 8:41 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာလ 19, 2019 ရက်တွင် (@celebface)
မင်းသမီး Chelsee Healey ဟာသူမရဲ့ခါးကိုဆွဲတင်ပြီးသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုတည်းဖြတ်တယ်လို့စွပ်စွဲခံနေရပါတယ် ဤပုံတွင်စာတန်းထိုးထားသည် - Chelsee တွင်လှပသောအိမ်တစ်လုံးရှိသည်။ သို့သော်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းသည်အနည်းငယ်ထူးဆန်းသည်။ ဤရွေ့ကားကွေးလိုင်းများနေရာတိုင်းဖြစ်ကြသည်? ။
ကိုယ့် adderall ဆေးပြားဘယ်မှာဝယ်နိုင်
Instagram မှတစ်ဆင့် @celebface
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုသို့ Rita တင်လိုက်သောပုံနှင့်မူရင်းကွဲပြားခြားနားပုံကိုပြသလိမ့်မည်။ သူမရဲ့ဗားရှင်းကသူမကိုပါးလွှာပြီးတောက်ပစေတယ်။
@ ritaora ၏မူကွဲ / မူရင်း (Getty Images)
မျှဝေသည် အဖြစ်မှန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် (@celebface) ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်၊
ဒီဟာတော်တော်အရူးပဲ အဆိုပါ post ကိုသူမအစစ်အမှန်နှင့်ရိုးရိုးသားသားဖြစ်လိုသူဟုခေါင်းစဉ်ထားတဲ့မော်ဒယ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပြုသဘောသံအမတ်ကြီး Hunter McGrady ရဲ့ရုပ်ပုံကိုမျှဝေပေးသည်။ ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသောဗွီဒီယိုတွင် Hunter သည်သူမကိုယ်ကိုပိုမိုပါးလွှာ။ ပိုမိုဆိုးရွားစေရန်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းလဲလိုက်သည်ကိုပြသနေသည်။
@huntermcgrady 'ငါတတ်နိုင်သမျှအစစ်အမှန်ဖြစ်ချင်တယ်။ ငါ့အတွက်၊ စံပြဖြစ်ခြင်းဆိုတာစစ်မှန်တာကိုဆိုလိုတယ်။ ငါနောက်လိုက်သောလူတို့နှင့်အတူရိုးသားချင် - သူတို့သည်ငါ၏တန်းတူဖြစ်သောကြောင့် 'ပရိသတ်များ' ဟူသောစကားလုံးကိုမုန်းတီးကြသည်။ လူတွေဟာငါနဲ့သူတို့ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့တကယ်ခံစားရစေချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကလူတွေကိုပြသဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ငါအားကစားသရုပ်ပြမော်ဒယ်တစ် ဦး ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါဟာနေ့ရက်များစွာအတွက်ချိုင့်တွေရတယ်၊ ငါ့အစာအိမ်ကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်လမ်းပိုင်းအမှတ်အသားများရှိသည်။ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေရတယ် ငါဒါတွေအားလုံးကိုလုပ်နေတယ်၊ ​​ငါသည်လည်းမဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာရှိတယ်။ (cools.com များအတွက်အင်တာဗျူး) ။ မူရင်းဓာတ်ပုံများ - www.si.com (အားကစားပုံဥပမာ)၊
မျှဝေသည် အဖြစ်မှန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် 7:12 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 29, 2019 ရက်တွင် (@celebface)
မော်ဒယ်လ်နှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောဂျုံးစမန်း (စ်) သည်သူမ၏ Bum နှင့် Boobs များကိုရုပ်သိမ်းပြီးသူမ၏မျက်နှာကိုတည်းဖြတ်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည်။
မျှဝေသည် အဖြစ်မှန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် 10:08 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာလ 7, 2019 ရက်တွင် (@celebface)
David Guetta ၏နောက်ခံအစိတ်အပိုင်းအချို့သည်ဝီကီယမ်ကိုကြည့်သည့်အခါသီးခြားစီရွေးချယ်ထားသည်။
Bella Hadid ၏ Calvin Klein လှုံ့ဆော်မှု၏တည်းဖြတ်ဗားရှင်းကိုတင်နေသည်ဟုစွပ်စွဲထားသောဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်လှည့်ပါ။
ကောင်းတဲ့ pic ပုံကိုဘယ်လိုယူရမလဲ
မျှဝေသည် အဖြစ်မှန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် 4:46 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 19, 2019 ရက်တွင် (@celebface)
Britney Spears ၏ဤပုံတွင်ဗီရိုများသည်နေရာအနှံ့အပြားတွင်မည်မျှရှိသည်ကိုသင်မြင်ရန်မြားများမလိုအပ်ပါ။
YouTuber ဂျိမ်းစ်ချားလ်စ်သည်သူ၏ခေါင်းနှင့်ပုံသဏ္changingာန်နှင့်ပုံသဏ္changingာန်ကိုပြောင်းလဲသည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည်။ နောက်ပြီး J-Lo နှင့် Rita Ora တို့လည်းထပ်မံဖော်ပြထားသည်။
မည်သည့်မိန်းကလေး squirt လုပ်နည်း
မျှဝေသည် အဖြစ်မှန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် 12:13 pm တွင် PDT မှာမေလ 17, 2019 ရက်တွင် (@celebface)
မော်ဒယ်နှင့် မတ်ေတာသကျွန်းရဲ့ Eyal Booker, ဒေလီလီ Belle Hamlin ၏ရည်းစား ထို့အပြင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ပါရှိပါတယ်။
ဒီစာမျက်နှာတွင်စုစုပေါင်းရေးသားသူ ၈၀၀၀ နှင့်နောက်လိုက် ၁.၃ သန်းရှိသည်။ ကြည့်ဖို့နောက်ထပ်ဥပမာအများကြီးအများကြီးရှိပါတယ်။ ?
• ဤသည်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသူမ၏ဓာတ်ပုံများကိုအပေါ်တူညီသောမိုclouds်းတိမ်ကို photoshops နှင့်ရိုးရိုးသားသားလာမယ့်ဘာလဲ
• ဤရွေ့ကား Love Island 2019 ၏သွန်းထံမှ WILDEST အသွင်ပြောင်းဖြစ်ကြသည်
• သငျသညျအရုပ်ဆိုးမဟုတ်ရုံဆင်းရဲသောသူကိုသက်သေပြရန်ဆယ်စုနှစ်၏အကြီးမားဆုံး Celeb အသွင်ပြောင်း